Waa maxay daadadku? | Saadaasha Shabakadda
Roobka si weyn ayaa loogu soo dhoweeyaa meelo badan oo adduunka ka mid ah, laakiin markii biyuhu xoog xoog leh u dhacaan ama muddo dheer, ayaa waxaa la joogaa xilli ay dhulka ama marinnada bullaacadaha ee magaalooyinka iyo magaalooyinku ay joojiyaan awood u lahaanshahooda.
Dabcanna, maadaama biyuhu yihiin dareere iyo, sidaas darteed, waa cunsur jidkiisa u maraya meel kasta oo uu tago, haddii daruuraha si dhakhso leh u kala firdhin mooyee, ma lahaan doonno wax aan ka ahayn inaan ka hadalno daadadka. Laakiin, Maxay yihiin iyo waxa sababa?
2 Maxaa sababa?
3 Difaacyo noocee ah ayaan ka leenahay iyaga?
4 Daadadka Spain
4.1 Daadkii 1907
4.2 Daad weyn oo ka dhacay Valencia
4.3 Daadkii 1973
4.4 Daadad Tenerife
4.5 Daadadka Fatahaadda
4.6 Daadadka Malaga
Daadadka waa qabsashada biyaha meelaha badanaa ka caagan tan. Iyagu waa ifafaale dabiici ah oo dhacayay tan iyo markii ay biyo ka jireen meeraha Dunida, qaabeynta xeebaha, oo gacan ka geysanaya sameynta bannaanka dooxooyinka wabiyada iyo dhul barwaaqo ah.
Waxaa sababi kara dhacdooyin kala duwan, kuwaas oo ah:
Qabow qabow: Waxay dhacdaa marka heerkulka dusha sare ee dhulku ka qabow yahay kan badaha. Farqigaani wuxuu keenaa cuf badan oo hawo kulul iyo qoyan inuu u kaco lakabyada dhexe iyo sare ee jawiga, taasoo keeneysa roobab mahiigaan ah, cawaaqibkiisana, waxaa jiri kara daadad.
Isbaanishka waa dhacdo sanadle ah oo dhacda xilliga dayrta.
Monsoon: monsoon waa dabayl xilliyeed oo ay soo saarto barokicinta suunka dhulbaraha. Waxaa sababa qaboojinta dhulka, kaasoo ka dheereeya kan biyaha. Haddaba, xagaaga heerkulka dusha sare ee dhulku wuu ka sarreeyaa kan badda, taas oo keenta in hawada ka saraysa dhulka ay si deg-deg ah kor ugu kacdo, taasoo keenta duufaan. Sida ay dabayluhu uga soo dhacayaan anticyclones (meelaha cadaadiska sareeyo) ilaa duufaannada (meelaha cadaadiska hooseeya) si ay isugu dheellitiraan labada cadaadisba, dabayl xoog leh ayaa si joogto ah uga soo dhacda badda. Sidaas darteed, roobabku waxay u da'aan si xoog leh, iyagoo kordhiya heerka webiyada.
Duufaannada: Duufaannada ama duufaannada waa astaamaha saadaasha hawada oo marka laga reebo in ay waxyeello badan geysan karaan ka mid yihiin kuwa biyaha badan sii daaya. Iyagu waa nidaam duufaan leh wareegga wareega oo ku wareegaya agagaarka xarunta cadaadiska hoose iyadoo quudinaysa kuleylka badda, taas oo heer kulkeedu yahay ugu yaraan 20 darajo Celsius.
Dhaxal: meelaha ay barafkeedu aadka u badan yihiin oo waliba si baaxad leh u sameeya, kororka kediska ah ee heerkulka ayaa keena fatahaadda webiyada. Sidoo kale waa la bixin karaa haddii barafku uu ahaa mid culus oo aan caadi ahayn, sida kuwa sida dhifka ah uga dhaca meelaha leh cimilo-hoosaad ama oomane.
Mawjadaha hirarka ama tsunamis: ifafaalahan ayaa ah sababo kale oo suurtagal ah oo daadka keena. Mowjadaha waaweyn ee dhulgariirku sababaan ayaa ku dhaqi kara xeebaha, taas oo dhibaatooyin badan u keenaysa dadka deegaanka iyo dhirta iyo xayawaanka meesha ku yaal.
Waxay badanaa ka dhacaan aagagga Baasifigga iyo Badweynta Hindiya, oo leh dhaqdhaqaaq dhulgariir oo ballaaran.
Difaacyo noocee ah ayaan ka leenahay iyaga?
Tan iyo markii ay bini-aadamnimadu bilaabeen inay noqdaan kuwo fadhiid ah, oo dega agagaarka wabiyada iyo dooxooyinka, had iyo jeer waxay leedahay dhibaato isku mid ah: sidee looga fogaan karaa daadadka? Masar, xilligii Faraaciintii, Wabiga Niil wuxuu u horseedi karaa qasaaro lixaad leh Masaarida, sidaa darteed waxay si dhakhso leh u darseen sida ay ugu ilaalin karaan dalagyadooda kanaallada leexiya biyaha iyo biyo xireennada. Laakiin nasiib daro waxaa loo isticmaali jiray in lagu burburiyo biyo dhawr sano ka dib.
Intii lagu jiray qarniyadii dhexe ee Isbaanishka iyo waqooyiga Talyaaniga, balliyo iyo barkado ayaa durba la dhisayay oo nidaaminaya habsami u socodka wabiyada. Laakiin ma ahayn illaa iyo hadda, xilligan la joogo, in waxa loogu yeero waddamada adduunka koowaad aan runtii awood u yeelan karno ka hortagga daadadka. Biyo xireenno, caqabado bir ah, nidaaminta keydadka, hagaajinta awoodda bullaacadda ee marinnada webiyada… Waxaas oo dhan, oo lagu daray saadaasha saadaasha hawada ee horumarsan, waxay noo oggolaadeen inaan si wanaagsan u maamulno biyaha.
Sidoo kale, tartiib tartiib waa mamnuuc in laga dhiso xeebaha, oo ah goobo aad ugu nugul daadadka. Xaqiiqduna waxay tahay, haddii aag dabiici ah ay ka dhammaato dhirta, biyuhu waxay yeelan doonaan tas-hiilaadyo badan oo wax walba lagu baabi'inayo, sidaasna ku gaaraya guryaha; Dhinaca kale, haddii aan la dhisin, ama haddii, in yar, in yar, deegaan uu si xun u ciqaabay bini-aadamku uu la soo noolaado geedaha asalka ah, halista fatahaaddu wax walba u baabi'in karto waa mid aad u yar.
Dalalka soo koraya, dhanka kale, nidaamyada sida ka hortagga, feejignaanta iyo ficillada ku xigga ayaa ka horumarsan, sida nasiib darrada ah lagu arkay duufaannadii ku habsaday waddamada Koonfur-bari Aasiya. Si kastaba ha noqotee, iskaashiga caalamiga ah ayaa doorbidaya ficillada si looga dhigo dadka ku nool meelaha halista ah ammaan.
Isbaanishka waxaan dhibaato weyn ku qabnay daadadka. Kuwa ugu daran taariikhdeena dhow waxay ahaayeen kuwa soo socda:
Bishii Sebtember 24, 1907, 21 qof ayaa naftooda ku waayey magaalada Malaga roobab mahiigaan ah awgood. Dooxada Guadalmedina ayaa buux dhaafisay, iyada oo sidata biyo aad u tiro badan iyo dhoobo kaasoo gaadhay 5 mitir oo dherer ah.
Daad weyn oo ka dhacay Valencia
Bishii Oktoobar 14, 1957, 81 qof ayaa naftooda ku waayey daadadka ka dhashay webiga Turia. Waxa jiray laba daad: kii ugu horreeyay ayaa ka yaabiyey qof walba, maaddaama oo ay Valencia si dhib leh u di’i jirtay roobka; kii labaadna wuxuu yimid duhurkii gobolka Camp del Turia. In this ee la soo dhaafay 125l / m2 la ururiyey, 90 kamid ah 40 daqiiqo gudahood. Wabiga wuxuu qulqulayay qiyaastii 4200 m3 / s. In Begis (Castellón) 361l / m2 waa la ururshay.
Oktoobar 19, 1973, 600l / m2 la ururiyey Zúrgena (Almería) iyo al Albuñol (Granada). Waxaa jiray dhimasho badan; intaa waxaa sii dheer, degmooyinkii La Rábita (Granada) iyo Puerto Lumbreras (Murcia) gebi ahaanba waa la burburiyey.
31-Mar-2002 232.6l / m2 waa la ururshay, oo xoog leh 162.6l / m2 hal saac, oo sababay dhimashada sideed qof.
Sawir - Ecestaticos.com
Intii u dhaxeysay 16-kii iyo 19-kii Diseembar, 2016, duufaantii Levante ee saameysay bulshada Valencian, Murcia, Almería iyo Jasiiradaha Balearic waxay sababtay dhimashada 5 qof. Meelo badan in ka badan 600l / m2 la ururiyey.
3-da Maarso, 2018 duufaan laga sii daayo illaa 100 litir meelo ka mid ah gobolka Malaga, sida dekedda Malaga, Galbeedka iyo Inland Costa del Sol, Serranía iyo Dooxada Genal. Nasiib wanaagse, ma jirin wax khasaaro bini’aadam ah oo laga qoomamo, laakiin adeegga gurmadka degdegga ah ayaa kaqeybgalay in ka badan 150 dhacdo oo ka dhashay geedo soo dhacay iyo waxyaabo kale, iyo dhul go ’.
Maaha markii ugu horaysay ee wax sidan oo kale ahi dhacaan. Xaqiiqdii, dhacdooyinkani nasiib darro aad bay u badan yihiin. Tusaale ahaan, Febraayo 20, 2017 140 litir oo biyo ah oo ku ururay halkii mitir laba jibbaaran hal habeen. Xaaladaha deg-degga ah ayaa kaqeybgalay 203 dhacdo sababo la xiriira daadadka dabaqyada dhulka, walxaha dhaca iyo gawaarida ku xayiran wadada.
Dhibaatadu waxay tahay in gobolka ay ku hareereysan yihiin buuro. Markuu roob da'o, biyaha oo dhan ayaa aada. Dadka reer Malaga waxay muddo dheer codsanayeen in la qaado talaabooyin looga hortagayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Waa maxay daadadku?